Sawiro+Faahfaahin Weerarka Hoteel Ambasaddor. – Calamada.com
Sawiro+Faahfaahin Weerarka Hoteel Ambasaddor.
Iyadoo inka badan 14 saac oo xiriir ah ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay maamulayeen hoteel Ambasaddor oo galinkii dambe ee shalay ay kula wareegeen weerar xoog ku gal ah waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay weerarka.
Dhimashada ayaa ku dhaw 35 ruux oo ay ku jiraan saraakiil ciidan’xildhibaano iyo maleeshiyaat ka tirsan dowlada Ridada federaalka.
Sidoo kale dhaawaca ayaa kor u dhaafaya 65 ruux oo ay ku jiraan xubno ka tirsan dowlada federaalka sida gudoomiyaha maxkamada gobalka Banaadir’xildhibaano iyo xubno kale.
Inka badan 14 saac oo xiriir ah waxaa sidoo kale gudaha hoteelka ku go’doonsanaay xubno sar sare oo ka tirsan dowlada Ridada federaalka sida Dr Cismaan oo ah garyaqaanka guud ee Ridada’waxaa sidoo kale jira xildhibaana iska soo tuuray dhismaaha sare ee hoteelka.
Gudaha hoteelka waxaa daadsan meydad fara badan oo ah xubnihii ka tirsanaay Kufaarta iyo Murtadiinta ee ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ku toogteen gudaha hoteelka.
Xarakada Mujaahidiinta AlShabaab oo fulisay weerarkan ayaa sheegtay in Hotelka Ambassador uu ahaa meel hooy u ah Saraakiisha murtadiinta iyo gaalada reergalbeedka, islamarkaana uu ka mid yahay hoteelada bartilmaameedka u ah Libaaxyada Islaamka.
Hoos Ka Daawo Sawirada Weerarka Hoteel Ambasaddor.
Previous: Dhageyso Sidee Kusoo Dhaweynaa Bisha Ramadaan Qeybta 6aad.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 26-08-1437 Hijri.